Nolosha magaalada Borlänge | Somaliska
Nolosha magaalada Borlänge
Magaalada Borlänge waa magaalo ka tirsan gobolka Dalarna oo caasimada Stockholm u jirta 2 saac markii tareen lagu safrayo. Borlänge ayaa waxay daris la tahay caasimada gobolka Dalarna ee Falun taasoo u jirta dhowr toban daqiiqo oo keliya. Magaalooyinka Borlänge iyo Falun ayaa waxaa ku nool dad ka badan 100,000 oo qof.
Soomaali badan ayaa ku nool magaalada Borlänge oo lagu qayaaso ku dhawad 2000. Soomaalida Borlänge ayaa ah kuwo inta badan ku cusub magaalada. Hadaba waxaan eegeynaa nolosha magaalad Borlänge…
Guryaha: helitaanka guryaha ee magaalada Borlange ayaa la ii sheegay in uu qaato bil ilaa 3 bilood iyadoo qiimaha guryaha uu kala baxo sidaan. Halkii qol ayaa lagu qiyaasaa 2500kr ilaa 3000kr. 2 qol ayaa u dhexeeya 3800kr ilaa 4000kr halka sadexda qol ay gaareysoo 5000kr.
Waxbarashada: Magaalada Borlänge waxaa ku yaala jaamacado iyo dugsiyo sare intaba. Soomaalida ayaa dhigta iskuulada laga barto SFIga oo ay masuul ka yihiin shirkado qaas ah. Iskuuladaas ayaa waxay qaabilsanyihiin hawsha SFIga , gymka iyo xitaa praktiga. 8 saacadood ayaa la dhigtaa iskuulka.
Shaqada: Soomaalida ku nool Borlänge ayaa la mid ah Soomaalida ku nool Sweden xaga shaqo la’aanta. Dadka inta badan waa shaqo la’aan, tirada yar ee shaqeysa ayaa u shaqeeya kamuunka iyo hayadaha dowliga ah. Praktiga qasab ma ahan balse qofkii hela ayaa la ii sheegay in ay noqon karto wado uu shaqo ku helo.
Nolosha Guud: Nolosha guud ee magaalada Borlänge ayaa ah mid wanaagsan, Soomaali badan ayaa ku nool magaalada oo qaarkood ganacsiyo ku leeyihiin. Dadku waxay leeyihiin goobo ay ku tukadaan iyo jaaliyado ay ku mideysan yihiin oo dhowr ah.
Isku socodka: Magaalada Borlänge waxaa ka shaqeeya basas iyadoo dadka iskuulada dhigta ay jeebkooda ka dhiibaan baska, dadka ayaa ka cabanayay in iskuulka uu ka fogyahay oo aan laga bixin lacagta baska. Magaalada Borlänge waxaa mara tareemo isku xira iyada iyo magaalooyinka waaweyn sida Stockholm iyo Uppsala. Sidoo kale magaalada waxaa ku yaala eyroboor.
Dhamaystir warbixinta Borlänge .
Waa warbixin wacan , walaalka soo qoray wuu mahadsanyahay , haddiise aan is dhaho sii yara dhamaystirwaxaan ku dari lahaa .
Magaalada waxaa ku taal ilaa 3 Dukaan oo Soomaali leeda 2 waa dhar 1 waa Raashin , dhawaaan waxaa laga furi Doonaa mid kale oo wayn oo waxyaabo badan lagu gado .
Magaalada waxaa kale oo ku yaal Dukaamo badan sida , Willy:S , Coop , ICA MAXI , Öobe , Biltema , Jula , ICA , ONOFF , EGGIGANTEN , EXPERRT , RUSTA , iyo HEMKÖP . iyo KUPOLEN oo ah Xarunta Ganacsiga ee Gobolka Dalarna waa Xaruunta Köp Centrum , waxaana ku dhexyaal 68 Dukaan .
Waxaa kale oo magaalada dhismihiisa ka socdaa Dukaanka Caanka Dunida ka ah ee Sweden laga leeya waa IKEA , oo sanadka cusub la furaa .
Magaaladana aadbeey isugu diyaarinee , oo xitaa Guryo Cusub ayaa in la dhiso shirkada Guryaha qorshaynee .
Waxaa ku yaal magaalada Borlänge , Xarunta Vägverket Xarunta Sweden ugu wayn , Waxaa kale oo ku Yaal Xaruunta Tareemada ee Sweden Ugu wayn .
Waxaa kale oo kuwaal , shirkado kala ah , SSAB , KVARSVDEN PAPPESBRUK .
Waxaa socota iyana Masjid wayn oo Muslimiinta dhisanayaan , welise go’aanka ugu danbeeyay ee ogolaanshaha sooma bixin , xaga dhulka laag dhisaa .
Dukaamada Soomaalida .
Al-Nasiib Store ( Dharka )
Qurux Shop ( Dharka )
Mubaarak Livs . ( Raashinka )
June 19, 2011 at 20:22
Dhanka Sportiga : Waxaa magaalada ka dhisan Koox Soomaaliyeed dhanka kubada cagta , kooxdaan waxaa la aas aasay 2009 , dhalinyaro Soomaaliyeed oo isu tagtay ayaana dhisatay .
Kooxda waxay hadda ka dheeshaa Heerka Divison 6 , waxayna Sanadkii hore kasoo bilaawday Divison 7 isla sanadkiiba way kusoo Guulaysteen , waxayna usoo gudbeen Heerka 6 aad oo hadda ay ka dheelaan , In ay sanadkaana Heerka 6 aad dhameeyaan aayan u rajaynaynaa .
Waa Kooxda inta aan oga ee Soomaali ah ee Heerka 6 aad ka dheesha magaceedu waa Swesom Fc = Swedhish Somali Footboll Club
June 20, 2011 at 11:39
Aad aya umahadsantihiin warbixintina wanagsan wana magalo ad u wanagsan hadayba saa tahay.
Walal bishaar ali hadad tahay wiilkii aan isku naqanay weka su,alaha o somalimix ahaa waxa kuwaydiin laha webka wuu ishaqeyn la,yahay maxa kudhacay macilada jirt mise wa dhangeyga hada war kahayso walal ika so waran thnkz.
Walaal Haawo xalay sidaa ayuu ahaa , hawl farsamo ayaana ku socotay , webkaa iyo webkaa hal wiil ayaa ka wada shaqeey , haddase waa uu wanaagsanyahay waana la soo booqan karaa .